ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/05/2018
အခြေပြုကျမ်းချက်။ ။လုကာ ၈း၅-၈
ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်ယာန်နှင့် အခြား ဘာသာများအကြား အဓိက ခြားနားချက်တစ်ခုမှာ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ဆံရေးရှိရန် အလွန်ပြင်းပြသော ဆန္ဒရှိသော အရှင်ဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်နှင့်ရှိသော ဆက်ဆံရေး အပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ဆိုသောအရာ မရှိလျှင် ဆက်ဆံရေး ဆိုသောအရာ မရှိနိုင်။ သင်သည် တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို စကားပြောရမည်။ သူပြောသည်ကို နားထောင်ရမည်။ ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယေက် ပိုမို သိကျွမ်းလာစေရန် အထောက်အကူပေးသည်။ ပျော်ရွှင်စရာ ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်ဆံရေး မရှိဘဲ တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ပါ။ ဆက်ဆံရေး မရှိလျှင် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးစေခြင်း၊ အမြတ်ထုပ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ကောင်းသော ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ ထိုအရာများ မပါရှိပါ။
ဓမ္မဟောင်းမှ ဗာဗုလုန် ရဲတိုက်ကြီးများ ဆောက်လုပ်သည့် အဖြစ်အပျက်ကို သင်မှတ်မိပါသလား။ အဘယ်ကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားရသည်ကို မှတ်မိပါသလား။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဆက်သွယ်မှု မပြုနိုင်သော ထိုအချိန်တွင် ထိုလုပ်ငန်းကြီး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည်။ လူများက ဘုရားသခင်ထက် ကြီးမား ကြီးမြတ်ခြင်းကို တောင့်တ ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က လူတို့တွင် ဘာသာစကား အမျိုးမျိုးတို့ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဆက်ဆံရေးဆိုသော အရာသည် ပျက်ဆီးသွားခဲ့သည်။ ထိုလူများ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် မဆက်သွယ် နိုင်လျှင် သူတို့၏ အောင်မြင်မှုနှင့် သူတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ ဘယ်သောအခါမှ ရှိလာမည် မဟုတ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က သိရှိခဲ့ပါသည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် နားလည်မှု မရှိနိုင်သည့် အချိန်မှ စတင်ကာ ဆက်ဆံရေး ကျဆုံးသွား ခဲ့ကြသည်။
ဤအချက်သည် မိသားစုများ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ဖော် ဆောင်ဖက်များ အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ သင်နှင့် အဆက်အသွယ် ပြုလျက်ရှိသော အခြားသူများ အတွက် သော်လည်းကောင်း မှန်ကန်လျက်ရှိပြီး ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး တွင်လည်း အလားတူပင် ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားသွားပါက သင်၏ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းမှုများလည်း ဆုံးရှုံးသွားရပါလိမ့်မည်။
ယခု ကျွန်ုပ် ဝေငှလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်နှင့် ဆက်ဆံရေး မည်သို့ တည်ရှိနိုင် မည်နည်း ဟူသည့် အကြောင်း အရာပင် ဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသံတော်ကို မည်သို့ ကြားကြ ပါသနည်း။ ကျွန်ုပ် ယခု ဖတ်လိုသော ကျမ်းတော်မြတ်မှာ ရှင်လုကာ အခန်းကြီး (၈) တွင် တွေ့ရသော အကြောင်းအရာပင် ဖြစ်ပေ၏။
မျိုးစေ့ ကြဲသောသူသည် မျိုးစေ့ကို ကြဲခြင်းငှါ ထွက်သွား၏။ အစေ့ကို ကြဲသည်တွင် အချို့သော အစေ့တို့သည် လမ်း၌ ကျသဖြင့် ကျော်နင်းခြင်းကို ခံရ၍ မိုဃ်းကောင်းကင် ငှက်တို့သည် ကောက်စားကြ၏။ အချို့သော အစေ့တို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ ကျသဖြင့် အပင်ပေါက် သောအခါ မြေသြဇာမရှိ သောကြောင့် ညှိုးနွမ်း ပျက်စီးခြင်း သို့ရောက်ကြ၏။ အချို့သောအစေ့ တို့သည် ဆူးပင်တို့တွင် ကျသဖြင့် ဆူးပင် တို့သည် အတူပေါက်၍ ညှင်းဆဲကြ၏။ အချို့သော အစေ့တို့သည် ကောင်းသောမြေ၌ ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်၍ အဆတရာပွါးများ၍ အသီးသီးကြ၏။ ဟုမိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ကြားစရာ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေဟု ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ (ရှင်လုကာ ၈း၅-၈)
ဤကျမ်းပိုဒ်၏ စကားလုံး တစ်လုံး ဖြစ်သော “ကြားစရာ နားရှိသောသူ” ဆိုသော စကားလုံးကို သတိရပါ။ သခင် ယေရှုက မိမိ၏ တပည့်တော်များကို နားထောင်မှုသည် မည်မျှ အရေးပါကြောင်းကို နားလည်ရန် ဖော်ပြသော စကားလုံး ဖြစ်ပေ၏။
ထိုဥမာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကား၊ မျိုးစေ့သည် ဘုရားသခင်၏ တရားစကားဖြစ်၏။ လမ်း၌ရှိသောသူကား၊ တရား စကားကို ကြားသည် ရှိသော်၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်စေခြင်းငှါ၊ မာရ်နတ်သည် လာ၍ တရား စကားကို နှလုံးထဲမှနှုတ် ယူသောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ကျောက် ပေါ်၌ ရှိသော သူကား၊ တရားစကားကိုကြား၍ ဝမ်းမြောက်သော စိတ်နှင့် ခံယူသော်လည်း စိတ်နှလုံး၌ အမြစ်မစွဲ၊ ခဏသာ ယုံကြည်သဖြင့် စုံစမ်း နှောင့်ရှက် ခြင်းကို ခံရသောအခါ ဖောက်ပြန်သောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ဆူးပင်တို့တွင် ရှိသောသူကား၊ တရား စကားကို ကြားသည် ရှိသော်၊ လောကီ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စည်းစိမ်ကြွယ်ဝခြင်း၊ ကာမဂုဏ် ခံစားခြင်း တို့သည် နှိပ်စက်၍ အသီးမသီး သောသူကို ဆိုလိုသတည်း။ ကောင်းသောမြေ၌ ရှိသောသူကား၊ ဖြောင့်မတ်စင် ကြယ်သော စိတ်နှလုံးနှင့် တရားစကားကို ကြားလျှင်၊ စွဲလမ်း သောအားဖြင့် မြဲမြံစွာ အသီးသီးသော သူကို ဆိုလိုသတည်း။
ဆီမီးထွန်းပြီးလျှင် အိုးမှောက်၍ဖုံးထားလေ့မရှိ။ ခုတင်အောက်၌လည်းထားလေ့မရှိ။ ဝင်သောသူ သည် အလင်းကိုမြင်စေခြင်းငှါ ဆီမီးခုံအပေါ်မှာ တင်ထားလေ့ရှိ၏။ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ရှိသမျှတို့သည် ထင်ရှားလိမ့်မည်။ ဝှက်ထားလျက် ရှိသမျှတို့သည်လည်း ထင်ရှားစွာပွင့်လင်းလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် သင်တို့သည် အဘယ်သို့ကြား နာရသည်ကို သတိပြုကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ အကြင်သူသည် ရတတ်၏။ ထိုသူအား ပေးဦးမည်။ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုသူ၌ ဥစ္စာရှိဟန်ဆောင်သမျှကိုပင် နှုတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အထက် ဖော်ပြပါ အခန်းငယ် (၁၈) သခင်ယေရှုပြောကြားချက်တွင် “သင်တို့သည် အဘယ်သို့ ကြားနာ ရသည်ကို သတိပြုကြလော။” ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
အခန်းငယ် (၈) တွင်သော်လည်းကောင်း၊ အခန်းငယ် (၁၈) တွင်သော်လည်းကောင်း သခင်ယေရှု ပြောကြား ချက်တွင် နားထောင်ရန် ပြောပါသည်။ နားထောင်ခြင်းသည် ဆက်ဆံရေး အလွန် ရေးကြီးပါ၏။ သင်သည် အခြားလူပြောသော စကားကို နားမထောင်ပါက သင်သည် ထိုသူနှင့် ဆက်သွယ်နေသည်ဟု မပြောနိုင်ပါ။
ဤပုံဥပမာ ပြောကြားချက်တွင် လူတို့၏ နားထောင်ခြင်း (၄) မျိုးကို မြင်တွေ့မိပါသည်။ နားထောင်မှု ပုံစံလေးမျိုး ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
သမ္မတကြီး ဖရန်ကလင် ရုစဗဲ့ နှင့် ပတ်သတ်သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်ကြားဘူးပါသည်။ သူသမ္မတဖြစ်စဉ်အခါ အိမ်ဖြူတော် ကြိုဆိုရေး ၀န်ထမ်းများသည် တာဝန် ၀တ္တရားအရ သာမာန် နားထောင်ရုံ မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်။ တစ်ခုသော ညနေခင်းတွင် သူ၏ စကားကို မည်မျှ အလေးထား နားထောင် သည်ကို သိရှိရန် လေ့လာမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့သည်။ သူ့ထံသို့ လာရောက်သောသူများသည် အပြုံး ချိုချိုလေးများဖြင့် လာရောက်လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ကြချိန်တွင် သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့က အပြုံးမျက်နှာဖြင့် “ဒီမနက် ကျွန်တော်ရဲ့ အဖွား အသက်ခံရတယ်ဗျာ” ဟုပြောလိုက်ရာ ထိုသူတို့က ပြန်လည်တုန့်ပြန်ကြသည်မှာ “တကယ် ချစ်စရာ ကောင်းပါတယ် သမ္မတကြီးရယ်” “ကြားရတာ ဘယ်လောက်တောင် ချိုမြိန်လိုက်သလဲဗျာ” စသည်ဖြင့် တုန့်ပြန်ကြသည်။ ထိုအခါ သမ္မတကြီး ရုစဗဲ့ နားလည်သဘောပေါက်လိုက်သည်မှာ ထိုသူတို့ အားလုံးသည် သူ၏ စကားကို ကောင်းစွာ နားမထောင်ကြကြောင်း သိရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သံတမန်တစ်ဦးနှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ချိန်တွင် “ကျွန်တော့်အဖွား ဒီမနက်အသက်ခံရတယ်ဗျာ” ဟူ ပြုံးပြီး ပြောလိုက်ရာ ထိုသံတမန်သည် အနည်းငယ် အံ့အားသင့်သော အမှုအရာဖြင့် တုန့်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ပြန်ပြောခဲ့သည်မှာ “သေချာပါတယ်ဗျာ။ ဒီမနက် သူလာမှာပါ” ဟု ပြောလိုက်လေသည်။
က. အချို့လူတို့သည် အလွန်အလုပ်များကြပြီး သူတို့၏ စိတ်အစဉ်မှာ ခက်ခဲမှု ပြဿနာ များကြောင့် နားထောင်နိုင်မှု မရှိကြချေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးများမှာ “ဘုရားမလိုပါဘူး။” ” ငါဘာသာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။” ” ငါသိပြီးသားပါ။” ” ငါအားလုံး သိပါတယ်။” ” ငါလက်နဲ့ ငါလုပ်တာ အစဉ်အပြေဆုံးပါဘဲ၊” ” ငါဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။” စသည်ဖြင့် ပြောဆို ထင်မြင်တတ်ကြသည်။ ထိုအရာ အားလုံးမှာ မာန်မာနများပင်ဖြစ်ပေသည်။ ထိုအရာများသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ကြားနာရန် ပိတ်ပင်မှု ဖြစ်စေသောအရာများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် လေထဲတွင် စကားပြောသူမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားတွင် စကားပြောသူဖြစ်သည်။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်ပေးသောအရာများသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး သူ့ကို အစဉ် တန်ဘိုးထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ နာကျင်ရသည့်အခါတိုင်း ရွေးချယ်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ အချို့က ပိုကောင်းသောအရာကို ရွေးချယ်ကြပြီး အချို့က ပိုမိုခါးသည်းမှုများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် နားမထောင်နိုင်သော အခြေအနေ ဖြစ်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နာကျင်ရသည့်အခါတိုင်း တံတိုင်းကြီးများကို တည်ဆောက်မိကြသည်။ ထိုတံတိုင်းကြီးများ၏ နောက်ကွယ်တွင်သာ နေထိုင်မိတော့သည်။ “ဘယ်သူမှ မလာနဲ့” ဟု အော် ဟစ်မိကြသည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရားသခင်ကိုပင် အပြစ်တင်ပြောဆို မိကြပြီး နားထောင်ခြင်းကို မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပေ။ ခါးသည်မှု များသည် ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းမြတ်ခြင်းတရားကို မခံစားနိုင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားတတ်သည်။
အချို့သောအစေ့တို့သည် ကျောက်ပေါ်၌ကျသဖြင့် အပင်ပေါက်သောအခါ မြေသြဇာမရှိ သောကြောင့် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ (လုကာ ၈း၆)
အမေရိကန်နိုင်ငံ လေတပ်စခန်းတစ်ခုကို လေ့လာမှု ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကြားသမျှအရာအားလုံး၏ ၉၀.၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို မေ့လျော့တတ်ကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
အချို့က အချိန်မကြာသေးသော်လည်း မေ့လျော့ တတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကျွန်တော်တို့နှင့် အရင်းနှီးဆုံး အချစ်ဆုံးသောသူများထံမှ ပြောသော စကားများကိုပင် မေ့လျော့နေတတ်ကြသည်။ “မနက်က ငါ့ကို ဘာလုပ်ဘို့ ပြောခဲ့သလဲ” ဟူသော စကားကို ပြန်လည် မေးမိသော အချိန်တွေ အများအပြား ရှိနေတတ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် စိတ်ထဲတွင် သိမ်းပိုက်ထားသောအရာများ ရှိနေတတ်ကြပြီး ထိုအရာများကြောင့် အားလုံးကို မေ့လျော့သွားကြသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ဆိုသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်တိုင်း ဖြစ်ပျက်နေသည် မဟုတ်ပါလော။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးသည် အခြားအရာများနှင့် ပြည်လျှံနေပြီး ထိုအခြေအနေထဲတွင် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို စကားပြောရန် ကြိုးစားနေသည်။ သတိရပါ။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကို သူ၏ နှုတ်ကပတ်တော် များနှင့် စကားပြောချင်နေပါသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်သာ စကားပြောချင်သည်မဟုတ်။ သူ၏နှုတ်က ပတ်တော်များနှင့် အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘ၀ကြီးတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲစေချင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောင်းလဲရန် ကြီးသော ဆန္ဒရှိနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားတော်များကို ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီး လိုက်လျှောက်ပါ ကျွန်တော်တို့ကို ပြောင်းလဲစေပါ လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်၏ အရေးပါမှုကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တရားတော်ကို ရှုမှတ်ဆင်ခြင်အောက်မေ့ခြင်းသည် မျိုးစေ့ကို ကြီးထွားစေသည် အစိုဓါတ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။
ထိုပညတ္တိကျမ်းစာ၌ ရေးထားသမျှအတိုင်း ကျင့်မည်ဟု စောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှါ ကျမ်းစာကို မဘတ်မရွတ်ဘဲမနေ၊ နေ့ညဉ့်မပြတ်ကြည့်ရှုဘတ်ရွတ်ရမည်။ သို့ပြုလျှင် သင်သည် အကြံထမြောက်၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်။ (ယောရှု ၁း၈)
၁အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏၊၊ ကိုယ်တော်ကို ကြိုးစား၍ ရှာပါ၏။ ရေမရှိ သွေ့ခြောက်သော လွင်ပြင်၌ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို ငတ်ပါ၏၊၊ အကျွန်ုပ်၏ ကိုယ်ခန္ဓာ သည်လည်း ကိုယ်တော်ကိုလွမ်းဆွတ်ပါ၏၊၊ ၂ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော်ကို မြင်ခြင်းငှါ သန့်ရှင်းရာဌာန တော်၌ ထိုသို့ ကိုယ်တော်ကို ဖူးမျှော်ပါပြီ၊၊ ကရုဏာတော်သည် အသက်ထက်သာ၍ ကောင်းသောကြောင့် အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းရပါမည်၊၊ ၄ထိုသို့အသက်ရှင်စဉ်တွင် ကိုယ်တော်ကို ကောင်းကြီးပေး ပါမည်။ နာမတော်ကို အမှီပြု လျက် လက်ကို ချီပါမည်၊၊ ၅အိပ်ရာပေါ်မှာ ကိုယ်တော်ကို အောက့်မေ့၍ ညဥ့်ယံ တို့၌ ကိုယ်တော် ကို ဆင်ခြင်လျက် နေသောအခါ၊ ဆီဥကို၎င်း၊ ဆူသောအသားကို၎င်း စား၍ ဝသကဲ့သို့၊ အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ဝ၍ရွှင်လန်းသောနှုတ်ခမ်းနှင့် အကျွန်ုပ်၏နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းပါမည်။ ၆အကျွန်ုပ်ကို မစတော်မူသောကြောင့် အတောင်တော်အရိပ်၌ ဝမ်းမြောက်ပါမည်။ ၇အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်၌ မှီဝဲ၍ လက်ျာလက်တော်သည် အကျွန်ုပ်ကို ထောက်မတော်မူ၏၊၊(ဆာလံ ၆၃း၁-၇)
အခုအချိန်ဟာ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောနေသောအရာကို စတင်သတိရ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ဆင်ခြင်အောက်မေ့ ရန် ဖြစ်ပါသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်ရုံမျှသာ (သို့မဟုတ်) ဖတ်ရှုရုံမျှသာ မပြုပါနှင့်။ နှုတ်ကပတ်တော် မျိုးစေ့ကို ကျောက်ပေါ်ကျ၍ အမြစ်မစွဲ နိုင်သောအခြေအနေ မဖြစ်ပါစေနှင့်။
သင်သည် စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင်ခြင်းအမှုကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းတွင် လုပ်ဆောင်၍ မရပါ။ ဂရိ ဘာသာစကားတွင် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကို “ခြားနားသော ဦးတည်ချက်သို့ စွဲထုပ်ခံရခြင်း” ဟု အဓိပ္ပါယ် ရှိနေပါသည်။ သင်၏ စိတ်အစဉ်သည် ခြားနားသော လမ်းသို့ ဦးတည်စေရန် ဆွဲထုပ်ခြင်းကို ခံနေရပါပြီလား။ သင်သည် ထိုအရာများကို အာရုံစိုက်နေပါက လမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်တွင် ရပ်တည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပေ။ ထိုအရာသည်သာလျှင် စိုးရိမ်စရာ ဖြစ်ပါ၏။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုလမ်းကို လျှောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အချိန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုးရိမ်းပူပင်မှုကို ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိုးရိမ်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘုရားသခင်ထံမှ စကားတော်ကို နားထောင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၄။ အချို့သောသူတို့သည် နားထောင်တတ်ကြပြီး ကြားတတ်သော သူများ ဖြစ်ကြ၏။
ယောဟန် ၁၀း၂၇ “ ငါ့သိုးတို့သည် ငါ့စကားသံကိုနား ထောင်၍ ငါ့နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ ထိုသိုးတို့ကိုငါသိ၏။“
တစ်ခါက တောရွာရှိ လူငယ်လေးတစ်ဦးသည် သူငယ်ချင်းရှိရာ နယူရောက်မြို့ကြီးသို့ အလည်အပတ်ရောက် ရှိလာခဲ့သည်။ သူတို့သည် ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လည်ခဲ့ကြသည်။ နယူယောက်မြို့ကြီး၏ အလယ် တိုင်းစကွဲယား နေရာ အထိ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသည်။ ကားသံ၊ လူသံ များဖြင့် ဆူညံလျက်ရှိသော နေရာဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် လူငယ်လေးက “ငါ ပုရစ်အော်သံ ကြားရတယ်” ဟု ပြောလိုက်ရာ သူငယ်ချင်းက “မင်းလာနောက် နေတာလား။ ဒီလို ဆူညံနေတဲ့ မြို့လယ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လိုလုပ် ပုရစ်သံကို ကြားရမှာလဲ။” ဟု ပြန်လည် မေးခဲ့ရာ ထိုတောသား လူငယ်လေးက “မဟုတ်ဘူး။ ငါ သေသေချာချာ ကြားရတယ်” ဟု ပြန်လည် ပြောဆိုခဲ့သည်။ သူတို့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်စလုံး သေချာစွာ ပြန်လည် နားထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ထိုတောသားလေးသည် လမ်းတစ်ဖက်ရှိ အလွန်ကြီးသော ဘိလပ်မြေကန်ကြီးနှင့်စိုက်ခင်းပြုလုပ်ထားသော နေရာသို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ချုံနွယ်များဖြင့် ပြည့်နေလေရာ ထိုခြုံပုတ်ကြီးထဲတွင် ပုရစ်များ ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာ ဖြစ်နေသည်။ မြို့သား ကောင်လေးက တောသားကောင်လေးကို သေချာစွာ ကြည့်လိုက်ပြီး “မယုံနိုင်စရာပါဘဲ” ဟုပြောပြီးနောက် “မင်းရဲ့ နားဟာ စူပါမင်းရဲ့ နားဖြစ်မယ်ထင်တယ်” ဟု ပြောလိုက်၏။ ထိုအခါ တောသားလူငယ်လေးက “ငါ့ရဲ့ နားဟာ မင်းတို့ရဲ့ နားနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ ဘယ်အရာကို သေသေချာချာ နားထောင်နေတာလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘဲ ကွဲပြားသွားတာပါ” ဟု ပြန်ပြောလိုက်၏။
← မိခင်ဟူသည် . . .
အလိုတော်နှင့်ညီသော ကိုးကွယ်ခြင်း →
5 comments on “ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း”